Nigranee | » डेंगु नियन्त्रण कसरी गर्ने ? डेंगु नियन्त्रण कसरी गर्ने ? – Nigranee
निगरानी September 22, 2019 45
डेंगुका लक्षण केके हुन्छन् ?
– पानीका भाँडा छोपेर राख्ने एवं हप्तैपिच्छे, खाली गर्ने र सफा गर्नेे।
– स्कुल, अस्पताल र कार्यक्षेत्र जस्ता मानिस र लामखुट्टेको बढी सम्पर्क हुने स्थानहरुमा नियन्त्रणका उपायहरु प्राथमिकता दिने।स्वास्थ्य पत्रिका बाट साभार।